ह्यारी केन भित्र्याउन किन आतुर छ बार्सिलोना ? - सबै खेल
ह्यारी केन भित्र्याउन किन आतुर छ बार्सिलोना ?
२० पुष २०७५, शुक्रबार ११:३८ January 4, 20190Comments barcelona, harry kane, luis suárez, Tottenham Hotspur
बार्सिलोनाका स्ट्राकर लुइस सुवारेज ३२ वर्ष पुग्न लागे । उनी लामो समयदेखि घुँडाको चोटले पनि ग्रस्त छन् । यस्तो अवस्थामा बार्सिलोना उनको विकल्पका रुपमा भरपर्दो र क्षमतावान स्ट्राइकरको खोजिमा छ ।
त्यसैले स्पेनिस जाइन्ट बार्सिलोना आफ्नो स्ट्राइकिङ लनाइअप बलियो बनाउन टोटनह्यामका इंग्लिस स्ट्राइकरलाई कीर्तिमानी मूल्य तिररे भए पनि भित्र्याउन चाहान्छ । केन अहिले उत्कृष्ट फर्ममा छन् । विश्वकपका गोल्डेन बुट विजेता केन जारी सिजन टोटनह्यामका लागि १८ गोल गरिसकेका छन् ।
केनलाई भित्र्याउन बार्सिलोनासँगै युरोपका ठूला क्लबले पनि चासो देखाइरहेका छन् । सन् २०१२देखि टोटनह्यामको सिनियर टिम खेलेका केनले १ सय ५८ गोल गरिसकेका छन् । उनी वर्तमान सयमका विश्वकै उत्कृष्ट फरवार्डमध्ये एक हुन् । केनकै उत्कृष्ट प्रदर्शनको मद्दतमा टोटनहयम अहिले इंग्लिस प्रिमियर लिगको तेस्रो स्थानमा छ ।
टोटनह्याम भने आफ्ना कप्तान केनलाई गुमाउन चाहँदैन । तर, क्लब आफ्नो नयाँ रंगाशाल निर्माण ढिलाईका कारण आर्थिक अभावमा छ । नयाँ स्टेडियम बनिसकेको र कहिले बनिसक्छ भन्ने टुंगो नभएकाले त्यसको टोटनह्यामा अनावश्यक बढी खर्च भइरहेको छ ।
यदी यो सिजनमा टोटनह्याम आफ्नो ह्वाइट हार्ट लेनमा नसरे निर्माण खर्च जुटाउनका लागि उसलाई आफ्नो स्टार स्ट्राइकर बेच्नुको विकल्प हुने छैन । केनको सुरुवाती मूल्य १५० मिलियन युरोभन्दा बढी हुने छ ।
स्पेनिस जाइन्ट बार्सिलोनको सर्टलिस्टमा केनका अलावा पिएसजीका युवा स्टार किलियन एमबाप्पे, एट्लेटिको मड्रिडका एन्टोइन ग्रिजम्यान र एभर्टनका ब्राजिलियन फरवार्ड रिचार्लिसन पनि छन् । तर, बार्सिलोनाको पहिलो प्राथमिकता केन नै हुन् ।
भरपर्दो स्ट्राइकर अत्यावश्यक परेकाले बार्सिलोना जुनसुकै हालतमा पनि केनलाई नै भित्र्याउन चाहन्छ । पछिल्लो समयमा निकै उत्कृष्ट प्रदर्शन गरिहेकाले पनि बार्सिलोना २५ वर्षीय केन भित्र्याउन आतुर देखिएइको हो ।
केनले च्याम्पिन्यस लिगको समूह चरणको पहिलोमा लेगमा बार्सिलोनाविरुद्ध उत्कृष्ट प्रशर्दन गर्दै गोल गरेका थिए । दोस्रो लेगमा पनि उनको प्रदर्शन त्यस्तै थियो । सोही प्रदर्शनकै कारण केन बार्सिलोनाका व्यवस्थापकको नजरमा परेका हुन् ।
केनको प्रतिभाको छनक पाइसकेको बार्सिलोना उनलाई क्लबमा अनुबन्धन गर्न जति सुकै मूल्य तिर्न पनि तयार देखिएको छ । बार्सिलोना सके यही जनवरी, नभए समर ट्रान्सफरमा केनलाई भित्र्याउन लागि परेको छ ।
तर, टोटनह्यामले यस अघि नै आफ्ना दुई स्टार खेलाडी, लुुका मोड्रिच र ग्यारेथ बेल, स्पेन पठाएर पछुताइ सकेको छ । त्यसैले, जसरी हुन्छ टोटनह्याम केनलाई लण्डनमै राख्न प्रयासरत छ ।
← लिभरपुलको अपराजित यात्रामा म्यानचेस्टर सिटीले लगायो पूर्णविराम
भारतमा नेपालले जित्यो पाँच स्वर्ण →
फुटबल खेलाडीको भक्ता वृद्धि गरिने
१९ श्रावण २०७५, शनिबार १९:०२ 0